Ubaxa | September 2019
Sida loo soo gurto oo u kaydi xawaashka khudaarta ee jiilaalka
Editor Ee Doorashada September 18,2019
Ugu Weyn Ee Ubaxa
Sidee loo daryeelaa tulips marka ay ubaxsan yihiin, habka ilaalinta nalka ubaxa
Waxaa laga yaabaa in muddada ugu fiican ee guga oo dhan waa waqtiga tulips Bloom. Waa dhirta quruxda badan leh ee muuqaalkoodu inooga sheegi doono imaanshaha guga. Farxadahan oo kale sida tulips, waxaan rabaa inaan ku dhufo xilli kasta, taas oo ah sababta ay beeralayda ubaxu u soo saareen hab lagu ilaaliyo ubax ilaa guga xiga iyagoo kaydinaya lafaha kaddib marka la qodo.
Koraaya geed ubax: abuurka habboon iyo siraha si loo daryeelo
Geedka geedka ubaxu waa dhir aan muuqan oo aan dahsooneyn. Beerta qaar ka mid ah quruxda quruxda, qaar kale ku doodaan in sida noocan oo kale ah ma aha in dabeecadda. Si kastaba ha ahaatee, ku yaal dukaamada dukaamada waxaad ka heli kartaa geedo geedo ubax ah, oo maalgeliya wakhti iyo foosha, koraan ubax qurux badan. Ama geed? Aynu fahmno waxyaabaha ka soo horjeeda beerahooda.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato korriinsho
Platicodone (Shan Shiine ah, Wareegga ballaaran) - Wakiil muddo dheer ah oo ka mid ah qoyska. Ubaxa waa jecel yihiin beeraley badan oo leh nimcadiisa. Si loo keeno cusboonaansho iyo casriyeynta naqshadeynta goobta ay ku yaal, beeralayda badan waxay rabaan inay bartaan sida si habboon u daryeeli karaan ubaxa barafka.
Sifooyinka geedo sii kordhaya ee carnation turkiga iyo daryeelka beerta
Carnation turkiga waa mid aad loo jecel yahay beerta. Ubaxa aan caadi ahayn ee dhalaalaya wuxuu caan ku yahay ubaxyadeeda iyo unpretentiousness. Carnation Turkish waxaa loola jeedaa dhirta ornamental, taas oo macnaheedu yahay in ay u baahan tahay daryeel gaar ah. Kobcinta carnidda Turkiga laga bilaabo abuurka Carnation Turkiga waxaa laga soo saaray abuurka iyadoo la adeegsanayo qaab abuur ah.
Ujeedada, habka waxqabadka iyo isticmaalka nidaamka kobcinta "Athlete" ee geedo
Baradhada Ukriga ee Yurub kuma soo dhaweynayaan
Sida loo quudiyo qajaarka lagu koriyo
Sidee iyo meeqa jeerba u caano caano
Ka baro noocyada ugu caamsan digitalis
Manjooyin cherry qabow
Cunnooyinka daawada dhaqanka
Noocyo tufaax ah
Kaluumaysigu waa nidaam isku dhafan oo miro-dhaf ah iyo habdhaqameedka biochemical si loo ilaaliyo tiro ballaaran. Silage waxaa lagu heli karaa halsano, taas oo ah, waa clamada aan lahayn oksijiin. Tani waa habka ugu caansan ee soo iibsiga. Isticmaal cagaar cagaaran oo dhir leh oo ku haboon abuurista quudinta xoolaha iyo digaaga. Read More
Aloe: beeritaanka, daryeel, dhalmo
Decoction ee miro: waxa faa'iido leh, waxa daaweeya, sida loo sameeyo iyo qaato
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ubaxa 2019